Bit By Bit - Ukudala intsebenziswano yobuninzi - 5.5.5 Yiba ngokweenqobo ezisesikweni
Isibongozo sokuziphatha sisebenza kuzo zonke uphando oluchazwe kule ncwadi. Ukongezelela kwimibandela eqhelekileyo yokuziphatha-echazwe kwisiqendu 6-ezinye iinkalo eziphathekayo zokuziphatha zivela kwimeko yokwenza intsebenziswano yeeprojekthi, kwaye ekubeni ukubambisana ngokubambisana kutsha ngokutsha kwintlalo yoluntu, ezi ngxaki zingenakubonakala ngokucacileyo ekuqaleni.
Kuzo zonke iiprojekthi zentsebenziswano yeeprojekthi, imiba yembuyekezo kunye nekhredithi iyinkimbinkimbi. Ngokomzekelo, abanye abantu bacinga ukuba kungabonakaliyo ukuba amawaka abantu asebenze iminyaka kwimvuzo we-Netflix kwaye ekugqibeleni awatholanga nhlawulo. Ngokufanayo, abanye abantu bacinga ukuba akunakulungele ukuhlawula abasebenzi kwiimarike zabasebenzi be-microtask imali encinci yemali. Ukongeza kule miba yembuyekezo, kukho imiba enxulumene nekhredithi. Ngaba bonke abathathi-nxaxheba kubambiswano obuninzi babe ngababhali bee-papi ze-science? Iiprojekthi ezahlukeneyo zithatha iindlela ezahlukeneyo. Ezinye iiprojekti zinikela ngetyala lokubhaliweyo kuwo onke amalungu ebambiswano lwenzululwazi; Ngokomzekelo, umbhali wokugqibela wephepha lokuqala leFoldit "Wabadlali beFoldit" (Cooper et al. 2010) . Kwintsapho ye-Galaxy Zoo yeeprojekti, abaxhasi kakhulu kunye nababalulekileyo banamenywa ukuba babe ngama-coauthors kumaphepha. Ngokomzekelo, u-Ivan Terentev kunye noTim Matorny, abathathi-nxaxheba ababini beRadio Galaxy Zoo, bebonke ama-coauthors kwelinye lamaphepha avela kuloo projekthi (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . Maxa wambi iiprojekthi zivuma kuphela iminikelo ngaphandle kokubambisana. Iinqunto malunga nokuqhagamshelana ngokucacileyo ziyahlukahluka kwimeko ukuya kwimeko.
Vula iifowuni kunye nokuqokelelwa kwedatha kungaphakamisa imibuzo enzima malunga nemvume kunye nobumfihlo. Ngokomzekelo, i-Netflix ikhiphe ukukhishwa kweekhredithi zabathengi kumntu wonke. Nangona ukulinganiswa kwee-movie kungabonakali bubucayi, bangabonisa ulwazi malunga nokukhethwa kwezopolitiko okanye ukuxhatshazwa ngokwesondo, ulwazi abathengi abangavumelani ukwenza uluntu. I-Netflix izame ukuphawula idatha ukuze ixabiso lingenakunxibelelaniswa nanoma yimuphi umntu, kodwa emva kweeveki emva kokukhutshwa kwedatha ye-Netflix yafunyanwa kwakhona nguArvind Narayanan noVitaly Shmatikov (2008) (bona isahluko 6). Ukongeza, ekuqokelelelweni kwedatha ekwabiwe, abaphandi banokuqokelela idatha malunga nabantu ngaphandle kwemvume yabo. Ngokomzekelo, kwiiprojekthi ze-Malawi Journals Projects, iingxoxo malunga nesihloko esibuhlungu (i-AIDS) zabhalwa ngaphandle kwemvume yabathathi-nxaxheba. Akukho nanye kwezi ngxaki zokuziphatha ezingenakuthenjwa, kodwa kufuneka ziqwalaselwe kwisigaba sokwakheka kweprojekthi. Khumbula, "isihlwele" sakho senziwe ngabantu.